Baiboly pejy 44 - Ny Baiboly
Voalohany < 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Manaraka Farany
Eksaody toko 23 (tohiny)
8Aza mandray kolikoly fa mahajamba ny mahiratra ny kolikoly, ka tsy ahombiazan'ny ady marina. 9Aza mampahory vahiny fa fantatrao ny fon'ny vahiny, satria efa mba vahiny tany amin'ny tany Ejipta koa hianareo.
27Handefa ny fampangorohoroako hialoha anao aho, hampifandritahiko ny firenena rehetra hahatongavanao ary hampiambohoiko anao ny fahavalonao rehetra. 28Handefa fanenitra hialoha anao aho, ka horoahin'ireny handositra ny tavanao ny Heveana, ny Kananeana mbamin'ny Heteana. 29Tsy hataoko indray mandroaka eo anatrehanao amin'ny taona iray anefa ireny, fandrao zary efitra ny tany, ka hihamaro ny biby dia hamely anao. 30Fa horoahiko tsikelikely eo anoloanao izy mandra-pahamaro isa anao, ka hahazoanao mizaka ny tany. 31Izao no hataoko faritaninao: hatramin'ny ranomasina Mena ka hatramin'ny ony, satria hatolotro eo an-tànanao ny mponina amin'ny tany ka horoahinao hiala eo anoloanao. 32Tsy hanao fanekem-pihavanana amin'izy ireo na amin'ny andriamanitr'izy ireo hianao. 33Tsy honina eo amin'ny taninao ireny, fandrao mampanota anao amiko, sao dia hanompo ny andriamaniny hianao ka ho tonga fandrika ho anao izany.
15Niakatra tao an-tendrombohitra Moizy, ary nosaronan'ny rahona ny tendrombohitra. 16Nipetraka teo an-tendrombohitra Sinaia ny voninahitry ny Tompo ka saron'ny rahona io nandritra ny henemana. Tamin'ny andro fahafito dia nantsoin'ny Tompo Moizy, tao anatin'ny rahona. 17Toy ny afo midedadeda teo an-tampon-tendrombohitra no fisehon'ny voninahitry ny Tompo tamin'ny zanak'Israely. 18Niditra tao anatin'ny rahona Moizy, dia niakatra tao an-tendrombohitra, ka nijanona teo an-tendrombohitra efa-polo andro sy efa-polo alina Moizy.
1Dia niteny tamin'i Moizy Iaveh nanao hoe: 2Ilazao ny zanak'Israely mba hanokan-javatra hafoy ho ahy, ka horaisinareo amin'izay olona rehetra mahafoy an-tsitra-po malalaka ny zavatra homeny ho ahy. 3Izao no fanatitra horaisinareo avy amin'izy ireo: volamena sy volafotsy ary varahina; 4jaky volomparasy, jaky mena mangatrakatraka, lamba mena antitra, rongony madinika sy volon'osy; 5hodritr'ondrilahy voasoka mena, hodi-dogaona, hazo akasià; 6solika hatao amin'ny fanaovan-jiro, zava-manitra hatao amin'ny diloilo fanosorana sy amin'ny zava-manitra fanembohana;
Pejy: Voalohany < 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.2885 seconds